अटो « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
भदौ १० देखि भृकुटी मण्डपमा ‘नाडा अटो सो’
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भदौ १० गतेदेखि नाडा अटो शो हुने भएको छ । सोमा ९५ ब्राण्डका सवारी साधन र त्यसमा प्रयोग हुने सामाग्री रहने छ । राजधानीमा आइतवार आयोजित पत्रकार
काठमाडौँ । लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनको दुर्घटना बढेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले दुई चालक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । विभागले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै प्रस्थानविन्दुबाट २५० किमी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको ट्याक्सी सेवा व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउन ‘यात्रु’ले अनलाइन ट्याक्सी सेवा शुरू गर्ने भएको छ । फोन, एसएमएस र मोबाइल एपको माध्यमबाट ट्याक्सी बोलाउन मिल्नेगरी यात्रुले सेवा
विद्युतीय सवारी–साधनका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ बनाइँदै, महशुल कति त?
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी–साधन सन्चालनका लागि सहज बनाउने लक्ष्यका साथ २० ओटा ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गर्ने भएको छ । विद्युतीय सवारी–साधनको प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको
“अशोक लेलैण्ड र रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडबीच सम्झौता”
काठमाडौं । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित आइएमई मोटर्स प्रा.लिद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा फाइनान्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल श्रेष्ठ
विद्युतीय गाडी खरिदमा “इ–अटो लोन स्किम”, नविल बैंकले ९.५९% कर्जा दिने
काठमाडौं । नविल बैंकले विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा प्रोत्साहित गराउने उद्देश्यले आकर्षक इ–अटो लोन स्किम ल्याएको छ । वातावरण जोगाउने प्रयासस्वरुप उक्त स्किम ल्याइएको जनाएको छ ।बैंकले विद्युतीय सवारी साधानको
“फुट्यो ताल, टुट्यो सपना”
काठमाडौँ । तुरतुरे ताल अब रहेन । चानचुन एक वर्ष थामिएको ताल साउनको बाढीसँगै बिलायो । सुन्दर ताल सोमबार बिहान एकाएक बगरमा परिणत भयो । अकस्मात बनेको ताल उसैगरी गयो
यातायात समितिको बैंकको रोकिएको रकम कम्पनीले चलाउन पाउने
काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षदेखि रोक्का गरेको यातायात समितिको बैंक खाताको रकम यातायात समितिबाट रूपान्तरित कम्पनीले चलाउन पाउने भएका छन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६ साउनमा गरेको निर्णयअनुसार यातायात समितिको बैंक
“सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले २५ करोडका गाडी खरिद”
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गतआर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदमा २५ करोड ४९ लाख ३ हजार १ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गाडी, मोटरसाइकल र स्कुटर
“हाते कागजको बढ्दो माग” – वार्षिक १० लाख बराबरको विक्री
बागलुङ । नेपाली हाते कागजको माग अत्यधिक भएपनि उत्पादन न्यून रहेको छ । कागज उद्योगमा लगानी, प्रविधि र जनशक्ति अभाव छ । वनमा लोक्ता त्यसै खेर गइरहेको छ । भएका
करारलाई स्थायी नियुक्ति : कर्मचारीहरुको तलबमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धिको प्रस्ताव…
नेपाल बैंकबाट बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण पाइने
भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो यस्तो सूचना
सिलाइ कटाइदेखि मोटरसाइकल मर्मतसम्म २४ किसिमका निःशुल्क तालिमको अवसर
लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, को-को उत्तिर्ण ? (नामावलीसहित)
यति धेरै संख्यामा खुल्यो जागिर, स्थायी हुने यस्तो छ अवसर…
सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउन ७० वर्ष पुग्नु पर्दैन ! जसको आउँछ…
मासिक एक लाख तलब सुविधासहित विभिन्न पदमा कर्मचारी माग, यस्तो…
फेरि निकाल्यो लोकसेवा आयोगले जरुरी सूचना
काठमाडौं । भर्खरै फेरि लोक सेवा आयोग अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस शाखाले विहीवार साँझ एक सूचना
आधा दर्जन विकास बैंकले मात्रै गरे लाभांश प्रस्ताव, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनासम्म आधा दर्जन विकास बैंकले मात्र आफ्ना सेयरधनीलाई
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १० दिन लामो उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ ।
लोकसेवा आयोगले निकाल्यो नतिजा सम्वन्धी यस्तो सूचना
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले फेरि थप लिखित नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले एक
सरकारले यी जिल्लामा खटायो महिला सिडियो, को- कहाँ ?
काठमाडौं । सरकारले छ वटा जिल्लामा महिलालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) खटाएको छ। भक्तपुरमा हुमकला